स्पेनमा डेटिङ एपहरू बढ्न जारी छ | बेजिया
मारिया vazquez | 22/06/2022 10:00 | जीवन शैली
सामान्य डेटिङ एप डाउनलोड ३२% बढ्यो यस वर्ष २०२२ को सुरुमा। यी पृष्ठहरू बारे पूर्वाग्रहहरू कम भएका छन् र अधिक र अधिक मानिसहरूले यी अनुप्रयोगहरूलाई कसैलाई भेट्ने अर्को तरिकाको रूपमा हेर्छन्।
यी धेरै पृष्ठहरू अन्तर्गत काम गर्छन् द्रुत गतिशीलता जसमा अर्को अपोइन्टमेन्ट छनोट गर्नको लागि स्क्रिनमा आफ्नो औंलालाई बायाँबाट दायाँ स्लाइड गर्न पर्याप्त छ। अरूसँग थप आरामदायी लय छ, प्रमाणित प्रोफाइलहरू र पर्दा पछाडि प्रतिक्रिया दिने मानव टोलीको लागि रोज्नुहोस्।
के तपाईलाई थाहा छ कि हामी स्पेनियार्डहरू हौं वरियतामा तेस्रो अनलाइन डेटिङ पोर्टल र अनुप्रयोगहरूको प्रयोग? हामी र्याङ्किङमा संयुक्त राज्य अमेरिका र ब्राजिललाई मात्र पार गर्छौं, जसले हामीलाई डेटिङ एपहरूको प्रयोगमा युरोपको शीर्षमा राख्छ। तर, यी अनुप्रयोगहरू के हुन् र स्पेनमा सबैभन्दा लोकप्रिय कुन हो?
1 सबैको लागि
2 स्पेन मा सबैभन्दा लोकप्रिय
El एकल जनसंख्या बढ्दै, जुन, राष्ट्रिय तथ्याङ्क संस्थानको तथ्याङ्क अनुसार, २०१९ मा ३६% बाट २०२१ मा ४०% मा गएको छ, र अनुप्रयोग बजारले आफ्नो सेवाहरू प्रदान गर्न सक्ने पुस्ताको खोजीमा निरन्तर खोजी गरिरहेको छ।
र न केवल पुस्ता niches बाट, यी अनुप्रयोगहरूले पनि अन्य प्रकार को प्रयोग गर्दछ चासो अनुसार niches, जात र धर्म पनि। आज त्यहाँ सबैका लागि डेटिङ अनुप्रयोगहरू छन्, यद्यपि सबैभन्दा लोकप्रिय छोड्दा हामी प्रयोगकर्ताहरूको कमी पाउन सक्छौं।
हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौँ, यी एपहरू मध्ये धेरैले द्रुत गतिशीलता अन्तर्गत काम गर्दछ जसमा यो पर्याप्त छ स्क्रिनमा आफ्नो औंला स्वाइप गर्नुहोस् अर्को भेटघाट छनोट गर्न। हामी कुरा गर्दैछौं, उदाहरणका लागि, टिन्डर वा बम्बल जस्ता अनुप्रयोगहरूको बारेमा, जसमा यो महिला हो जसले पहिलो कदम चाल्नु पर्छ।
अर्कोतर्फ, अर्को प्रकारको apss ले धेरै फुर्सद र मैत्री ठाउँ भएको बहाना गर्छ। यी सामान्यतया धेरै विशिष्ट niches को उद्देश्य हो, जस्तै मामला हो, उदाहरण को लागी, Ourtime को, 50 बर्ष भन्दा माथिको उमेर मा केन्द्रित। यहाँ उम्मेदवारहरूको चयन यो एक धेरै विस्तृत प्रश्नावलीको जवाफ दिएपछि सम्बद्धता अनुसार प्रस्ताव गरिएको छ र सबै प्रोफाइलहरू प्रमाणित छन्, अर्थात्, अनुप्रयोगले डिजिटल प्रोफाइलमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति वास्तविक संसारको व्यक्तिसँग मेल खान्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ।
त्यहाँ एप्सहरू छन् जसमा प्रयोगकर्ताहरू मुख्यतया अनौपचारिक वा यौन मुठभेडहरू र अन्य जसमा सम्बन्धहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ। सर्वाधिक लोकप्रिय, यद्यपि, यी सबै प्रोफाइलहरूमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्, यसरी प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो विविधता समावेश गर्दछ।
स्पेन मा सबैभन्दा लोकप्रिय
Edarling र Meetic तिनीहरू अझै पनि स्पेनमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएका पोर्टलहरू हुन्। दुबै साझेदारहरूलाई सुझाव दिन म्याचमेकिंगमा आधारित छन्, तपाईंलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा सम्बन्धित र मिल्दो व्यक्तिहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ। म पक्का छु कि तपाईले पहिलोको नारा थाहा पाउनुहुनेछ: एकल माग गर्नका लागि।
दोस्रो, Meetic, Tinder, Hinge, Plenty of Fish, OK Cupid, Ourtime or Match जस्ता एपहरूसँग डेटिङ स्पेसमा प्रभुत्व जमाउने म्याच समूहसँग सम्बन्धित छ। यी बीचमा चकमक अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन र इटाली जस्ता भिन्न देशहरूमा शीर्ष3सबैभन्दा लोकप्रिय डेटिङ एपहरूमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय छ।
विभिन्न अनुमानहरूका अनुसार, म्याच समूहले कुल डेटिङ एप डाउनलोडहरूको 56% भन्दा बढीको लागि योगदान गर्दछ, त्यसपछि म्याजिकल्याब समूहको स्वामित्व रहेको छ। बम्बल र बदू, स्पेनमा सबैभन्दा लोकप्रिय डेटिङ अनुप्रयोगहरू मध्ये अर्को।
यदि तपाइँ तपाइँको क्षेत्रमा तपाइँको समान रुचि भएका मानिसहरूलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने, साथी बनाउन वा सम्बन्ध खोज्न चाहनुहुन्छ भने, यी डेटिङ अनुप्रयोगहरू हुन् डिजिटल विकल्प ती अन्य परम्परागत र आमनेसामने काम गर्ने तरिकाहरूमा। तिनीहरूका विवरणहरू पढ्नुहोस्, तिनीहरूमध्ये केहीको लागि साइन अप गर्नुहोस् र प्रयास गर्नुहोस्।
ध्यान राख्नुहोस् कि यस तरिकाले मानिसहरूलाई भेट्न धेरै कर लाग्न सक्छ। प्राथमिकतामा मिल्दोजुल्दो प्रोफाइलहरू फेला पार्न खोज्नको लागि समय लाग्छ, जसले हामीलाई हेरेर मात्र होइन तर तिनीहरूले के भन्छन् भनेर प्रवेश गर्छ। यसबाहेक, एक पटक फेला परेपछि, तिनीहरूसँग सधैं हामी जस्तै लक्ष्यहरू हुँदैनन्। यदि हाम्रो उद्देश्य धेरै विशिष्ट छ भने, यसले लगातार एउटै चरणमा जान निराशा उत्पन्न गर्न सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » जीवन शैली » स्पेनमा डेटिङ एपहरू बढ्न जारी छ
शरीर धुंध: यो के हो, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र अधिक